Tantara: Lehilahy Iray Nahery Fo - Tranonkala Ofisialin’ny Vavolombelon’i Jehovah
Taorian’ny nahafatesan’i Enoka, dia mbola niharatsy hatrany hatrany ny olona. Milaza ny Baiboly fa ‘izay ﬁsainana rehetra avy amin’ny fony dia ratsy ihany mandritra ny andro’, ary ‘nanjary feno herisetra ny tany.’
Fantatrao ve ny iray amin’ireo antony nisian’ny ﬁkorontanana be erỳ teto an-tany tamin’izany fotoana izany? Izany dia satria nanana fomba vaovao nitarihana ny olona hanao zava-dratsy i Satana. Hianarantsika manaraka ny momba izany.
Niaina haﬁriana ny olona tamin’izany andro izany, nefa ﬁry taona monja no nahaveloman’i Enoka?
Nanao ahoana ny ﬁfandraisan’i Enoka tamin’i Jehovah? (Gen. 5:24)
Iza no lazain’ny Baiboly fa lehilahy ela velona indrindra, ary ﬁry taona izy tamin’izy maty? (Gen. 5:27)